I-Condo Yesitezi Sesishiyagalombili w/ Ukubukwa kwe-Ocean, Iphuli Ehlanganyelwe, I-Hot Tub, ne-WiFi yesivinini esikhulu
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Vacasa Florida
U-Vacasa Florida unokuphawula okungu-8844 kwezinye izindawo.
Khumula izimbadada zakho ebhentshini elakhelwe ngaphakathi bese uhlala kulo. Kulula ukupholisa umoya kuleli khwelo lesimanje elingasogwini elinezindonga ezimhlophe qhwa kanye namathayili odonga ukuya odongeni (ngaphandle kwamagumbi okulala, ngoba ubani ofuna izinzwane ezipholile ekuseni? ). Uzokwazi ukuhlehla neqembu lonke elikugumbi lokuhlala le-condo - pheka ama-popcorn ekhishini eligcwele futhi ulethe! Kunezinsiza eziningi esandleni zokupheka, okuhlanganisa abenzi bekhofi ababili ukuze wonke umuntu ahlale ene-caffeine usuku lonke. Donsa amadrapes aphakeme avalwe bese ubuka imuvi ku-TV yesikrini esikhulu esifakwe egunjini lokuhlala. Kodwa uma othile ephikelela ekudleni kwakusihlwa etafuleni, kukhona indawo yokudlela egcwele (egcwele i-chandelier) yokusebenzela iqembu. I-balcony enefenisha ihlinzeka ngombono obanzi kakhulu wolwandle, futhi ifinyeleleka kusuka kokubili igumbi lokuhlala kanye negumbi lokulala elikhulu. Ungakhathazeki ngesikhathi sokulala - igumbi ngalinye linefenisha yophahla kanye ne-TV ukuze ukwazi ukupholisa umoya. Igumbi lokugezela ngalinye ligcwele futhi lineshawa elizimele elenziwe ngamatshe. Iwasha/isomisi sangasese sizonakekela amasudi okugeza namathawula olwandle ngenkathi ukhukhuleka futhi uphuphe ulwandle.
Ulwandle luwuhambo olufushane nje lwehla nge-TOPS'L Beach Boulevard. Ungakhohlwa ukuma e-Pompano Joe's ukuze uthole izimfanzi zikakhukhunathi uma usufikile, ngaphansi kwamamayela amahlanu nje ukusuka lapho. Ngale kosebe lolwandle, izivakashi zingakwazi ukungena emigodini engu-18 e-Raven Golf Club ewine imiklomelo eyimayela elilodwa nesigamu ukusuka e-condo. Thenga izimpahla zomklami e-Silver Sands Premium Outlets, usethe ukuqhela kancane ngamamayela amabili. I-Gator Beach, engaphansi nje kwamamayela ayisishiyagalombili ukusuka e-condo, isingatha imibukiso yamahhala nemibukiso ebonisa esinye sezilwane ezidume kakhulu e-Florida. Kukhona ngisho nengwenya eyi-albino engavamile!
Izinto okumele uzazi:
I-WiFi yamahhala enesivinini esikhulu
I-sofa elingana nendlovukazi egumbini lokuhlala inikeza indawo yokulala eyengeziwe
I-TOPS'L Summit 805 kanye ne-TOPS'L Summit 805b zingaqashwa ngokuhlukana noma ndawonye.
Lokhu kuqashwa kusezingeni lesi-8.
Amanothi Okupaka: Kukhona indawo yokupaka yamahhala yezimoto ezi-2. Ukungena kwesivakashi nokufinyelela ku-TOPS'L Beach & Racquet Resort kuqala ngo-4:00 pm CST. Sicela uqhubekele ebhilidini Lokubhaliswa Kwezivakashi ukuze uthole imvume yakho yokupaka. Uma kwenzeka ufika ngemva kwamahora okusebenza, ungase uthathe indawo yakho yokupaka esangweni lonogada emnyango omkhulu. Ngakusasa ekuseni, sicela uqhubekele esakhiweni sethu Sokubhaliswa Kwezivakashi ukuze uqedele ukubhalisa kwakho. Siyabonga ngokukhetha i-TOPS'L! Uma udinga noma yiluphi usizo ngesikhathi uhlala, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ku-850-267-9222.
Ukuhoxiswa Komonakalo: Isamba sezindleko zokubhukha kwakho kwalesi sakhiwo sihlanganisa imali yokuyekwa komonakalo ehlanganisa wena kufika ku-$2,000 wokulimala kwengozi kweNdawo noma okuqukethwe kuyo (okufana nefenisha, izinto ezilungiswayo, nezinto zikagesi) inqobo nje uma bika isigameko kumphathi ngaphambi kokuphuma. Ulwazi olwengeziwe lungatholakala kokuthi "Imithetho Eyengeziwe" ekhasini lokuphuma.